CLS DC-10-30F repaint 3 afọ 4 ọnwa gara aga #431
Onye obula nwere ohere imeghachi m ihe, maka CLS DC-10? Ọ bụ ndozi dị mfe mana anaghị m enwe mmetụta nke ịzufu ya, n'eziokwu. Ejirila m otu esi etu ọ ga-adị, yana eserese nke nwere ihe ọkpụkpọ abụọ dị na ya.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-asụ mkpu na-eme nke a, m ga-enwe ekele maka ya
na painkit dị ebe a: www.commerciallevel.com/misc/DC10/DC10_paintkit.zip
CLS DC-10-30F repaint 3 afọ 4 ọnwa gara aga #432
Emeela m nwere ike imeghachite 100 maka ụgbọ elu FlightGear sim, mana FSX Mmegharị adịghị na m otu. Ọ dị mma n'anya.
CLS DC-10-30F repaint 3 afọ 4 ọnwa gara aga #436
O doro anya na mmadụ nwere ikike ịrụ ọrụ ahụ ,,,, nnukwu nkwekọrịta m na-ekwu!
CLS DC-10-30F repaint 3 afọ 4 ọnwa gara aga #437
Ihe m kwuru bụ naanị ahụ dum, nke bụ otu mpempe achịcha ... ma e nwere LOT karịa ya karịa nke ahụ.
Onye ahụ zuru ezu nwere ụdị ọkwa dị iche iche na PSD (nke bụ naanị PSD na kit).
nke a bụ ihe folda ahụ dị ka mgbe ị na-emeghe ya ... lol prnt.sc/ej7rar
Enweghị m ndidi iji meeghachi ihe ejiji fuselage lol
Oge ike page: 0.330 sekọnd